HETSIKA FARAN’NY HERINANDRO : Azonao atao ny misafidy ireo fialam-boly mety aminao
Hanafana ny Piment Café Behoririka i Mahery sy Luk
Hampiala voly ao amin’ny Piment Café Behoririka i Mahery sy Luk, anio manomboka amin’ny 9 ora alina. Hitondra ny hira an-gitara amin’ny gadona bà gasy ireto mpanakanto andrarezina amin’ny fampialana voly takariva ireto. Ankoatra ireo hira nahafantarana azy mirahalahy ireto tao anatin’ny tarika Johary, dia hitondra ireo hiran’olona nankafizan’ny maro azy i Mahery sy Luk amin’io fotoana.
Vazo miteny hiarahana amin’Ifanihy ao amin’ny QG Tsimbazaza
« Cabaret Vazo Miteny », miaraka amin’Ifanihy etsy amin’ny QG Tsimbazaza. Hokaloiny amin’io ireo hira efa nahafantarana azy hatramin’izay, toy ny « Ikala Dauphine », « Lemasira », « Ambatofotsy gara »...Hanomboka amin’ny 9ora alina ny lanonana. Hisy ny vahiny nasain’Ifanihy hifanotrona aminy hanome fahafaham-po ireo mpankafy amin’io, izay tsy iza fa ny tarika Manana Ara. Gadona gasigasy ihany koa no hahafantarana ity tarika ity, ka dia hanjakan’ny gitara sy ny vazo miteny tanteraka io lanonana takariva io.
Hitsinjaky tsapiky etsy amin’ny Bonara Be 67HA i Khaleba
Hifanjevo amin’ny tsapiky hiaraka amin’ireo mpankafy azy etsy amin’ny Bonara-Be chez Sa-Yah 67Ha indray i Khaleba. Mpanakanto avy any amin’ny Faritr’i Menabe ny tovolahy ary ny gadona tsapiky no sehatra nampiakatra ny lazany teo amin’ny zava-kanto. Hanomboka amin’ny 9 ora alina ny lanonana anio. Ity no alim-pandihizanafaharoa tanterahin’ity mpanakanto ity hiarahany amin’ireo mpankafy azy eto an-drenivohitra. Amin’io fotoana io ihany koa no hitondrany ireo hira vaovao « Vibrez les mains » sy « Farahy lilatsy ». Mampanantena ambiansy mafana ny tovolahy amin’io fotoana io.
Hitondra ny R’n’b etsy amin’ny Cercle Franco Malgache i Jazz MMC
Hanafana ny ao amin’ny Cercle Franco Malgache Anosy i Jazz Mmc sy ireo mpanakanto tanora hafa avy amin’ny Faritra Diana, anio manomboka amin’ny 10 ora maraina mandra-pahariva ny andro.
Hetsika karakarain’ny Fikambanan’ny mpianatra avy any Diégo Suarez monina eto an-drenivohitra. Gadona samihafa no hita amin’io fotoana io, toy ny Coupé décalé » sy ny Gweta ireo gadona tena nahafantarana an’i Jazz Mmc hatramin’izay.
Hampitotorebika amin’ny kilalaky i Barinjaka anio etsy amin’ny Maxim L’avenir 67ha.
Sehatra iray manokatra ny varavarany ho an’ny mpanakanto. Hampitotorebika ireo mpiala voly etsy amin’ny Maxim l’Avenir 67Ha indray i Barinjaka.Manomboka amin’ny 9 ora alina ny alim-pandihizana, hiarahana amin’ity mpanakanto ity sy ireo mpankafy azy. Hitondra ireo hira nampiakatra ny lazany eo amin’ny sehatry ny mozika hatramin’izay, toy ny « Gadàna » sy « Andeso amin’ny coin coin ». Mampanantena ambiansy tanteraka amin’io fotoana i Barinjaka.
Hiverina etsy amin’ny Bonara Be 67Ha indray i Grand Maître Tianjama
Ela tsy tazana. Hiverina hiaka-tsehatra etsy amin’ny toeram-pilanonana Bonara-Be 67Ha indray i Grand Maître Tianjama. Ny sabotsy 22 avrily izao, hanomboka amin’ny 9 ora alina no hitondrany ireo hira nahafantarana azy hatramin’izay, toy ny « Regarega ». Haresaka, araka izany, ny etsy 67Ha, satria hoporofoin’ity mpanakanto avy any amin’ny Faritra Sofia ity, ny fahaizany manafana lanonana takariva.
Hanjakan’ny jazz sy ny gitarana ny Escale Artistique Ambohipo
Hiaka-tsehatra etsy amin’ny Escale Artistique Ambohipo i Dina Mialinelina sy ny tarika Cordes Sans Cibles anio amin’ny 8 ora alina. Natao ho an’ireo mpankafy ny gadona Jazz ny fampisehoana. Hampiavaka izany ihany koa ny fitendrena gitara amin’ny fomba mampiavaka azy.